Sharciga degenaansha ehelka kale - InfoFinland
U soo guurista Finland > Aan aheyn muwaadin EU > Xubin qoys oo Finland joogta > Sharciga degenaansha ehelka kale
Sidoo kale muwaadiniinta finnishka ehelka kale aan ka aheyn lamaanaha, waalidka carruurta da’da yar ama da’ yarta, waxaa suurogal ah siyaabo qaarkood iney ku helaan sharci qoys ahaan.
Sidoo kale waxaa sharciga degenaansha la siin karaa ehelka kale, kaasoo haysta sharciga degenaansha kuna heley badbaadadda caalami ah. Haddii sharciga degenaansha yahay mid kale oon aheyn badbaado caalami ah, ehelka kale looguma ogolaanayo sharci degenaansho.
Ehelka kale wuu ku heli karaa sharci degenaansho ah, haddii uusan markaa ka maarmi karin qofka u jooga Finland. Sharcigaas waxaa la siin karaa ilmaha qaangaarka ah (18-jir) waalidkiis. Dhaqaalo yarida iyo caafimaad darada ma aha mid buuxineysa sharuudaha lagu bixiyo sharciga degenaansha.
Ehelka kale wuu ku heli karaa sharciga degenaanshaha hadduu si rasmi ula qaatey qoyska nolol xiriir ah intuusan imaanin Finland, waxaana laga rabaa sidoo kale iney tahay arrin cad waxa kala geeyey nolosha qoyska tusaale qaxitaan qaxootinimo.
Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Shaciga ka soo codso wadankaaga ama wadanka kale oo aad markaas sida sharciga ah ugu nooshahay.
Codeysiga waad ka sameysan kartaa internetka adigoo isticmaalaya bogga adeegga internetka ee Enter Finland. Markii aad sameysid codsiga waa inaad u tagtaa safaarada Finland ee kuugu dhow ama barta adeegga ee Xaafiiska socdaalka, si aad u caddeyso ama aad u geyso aqoonsigaaga iyo codsiga warqaaha asli ahaantooda. Waa inaad safaarada ku tagto sadex bilood gudohoon laga bilaabo taariikhdii aad codsiga internetka ka xaraysay. Xal ka gaarista sharcigaaga waxaa la bilaabayaa kadib, markaad u tagto safaarada ama barta adeegga. Caadi ahaan waa inaad safaarada ama barta adeegga horay waqti uga sii qabsato.
Xusuusnow inaad si joogto ah u fiiriso akoonkaaga Enter Finland. Haddii codsigaaga xal ka gaaristiisa awgeed lagaaga baahdo faaf faahin dheeraad ah, akhbaarta waxaa laguugu soo dirayaa akoonkaaga.
Haddii aadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn inaad codsiga internetka ka buuxiso, waxaad sidoo kale foomka codsiga iyo lifaaqyadiisaba keeni kartaa safaarada Finland ee kuugu dhaw. Haddaad codsiga ku dalbaneyso foomka la buuxinayo, Foomka codsiga waxaad ka soo daabacan kartaa bogga shabakada Hogaanka socdaalka.